NAB Show New York: စက်မှုပညာရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးသောစုရုံးခြင်း NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Show ကိုနယူးယောက် NAB: စက်မှုပညာရှင်များသည်အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသောစုရုံးခြင်း
အဆိုပါရေဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ဦးသံသယကြီးမားဆက်သွယ်ရေးနှင့်အသံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာထိရောက်မှုတစ်ခမ်းနားစကေးပေါ်တွင်မျှဝေတဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်သူအများအပြားရေဒီယိုပညာရှင်များအဘို့ဖန်တီးမှုပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုစိန်ခေါ်မှု, သေးသောအညီအမျှဆန်းသစ်ကုမ္ပဏီကြီးမပါဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်၏စကားသံအဖြစ်, NAB (လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး) အသံလွှင့်များ၏အရည်အသွေးနှင့်အမြတ်အစွန်းတိုးတက်အောင်အတွက်ဆက်ခံထားပါတယ်, ဒါမှာပင်မြင့်မားရောက်ရှိဖို့ရန်စီစဉ် Show ကိုနယူးယောက် NAB။ ရေဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လတ်ဆတ်စတင်ကြီးထွားသို့မဟုတ်ရဖို့ရှာဖွေနေထွက်ရှိမည်သည့်ရေဒီယိုပညာရှင်များအဘို့, NAB နယူးယောက်တက်ရောက်ရန်နိုင်ပါတယ်။ New York ကမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးဖန်တီးမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအသိပညာရရှိမှုတစ်ဦးနည်းလမ်းများအဖြစ်ထူးထူးအထွေထွေရှိငြားအသိဉာဏ်နှင့်အမြင်စိတ်ထဲတွင်တစ်ခု setting ကိုအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ချိတ်ဆက်ပေါင်းစည်းရန်အဘို့အဆုံးစွန်ဟော့စပေါ့ဖြစ်လိမ့်မည် NAB အလွန်များစွာကူညီနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်ကျွမ်းကျင်မှု, နည်းပညာ, နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ သူတို့ကိုလမ်းညွှန်နှင့်ရေဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်မပေါက်ပါဘူး။ တွင် NAB ပြရန် New York ကအသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံကနေရေဒီယိုပညာရှင်များ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးမှန့်အသတ် access ကိုရလိမ့်မည် ရပ်ရွာရောနှော, အထူးသအပြည့်အဝကိုဗတ္တိဇံနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသူ့ဟာသူ၏တိုးတက်မှုနှင့်က၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိုသောအလွန်ဖန်တီးမှုများ furthering အထောက်အကူပြုဖို့ဒီဇိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ယူနှင့် networking, စိတ်ကူးခွဲဝေမှုမှတဆင့်ဖန်တီးမှုများကိုချိတ်ဆက်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အောက်တိုဘာလတစ်လအလွန်မကြာမီတစ်လျှောက်ရှိလာမယ့်နှင့်အတူ, NAB ပြရန် နယူးယောက်မဆိုအယောင်ဆောင်ရေဒီယိုအဘို့ဖြစ်ရပျကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြီးထွားဖို့ရှာဖွေနေနှင့်တစ်ခုခင်းကျင်းနှင့်အတူနေသည် ညီလာခံ / အစီအစဉ်များ ရေဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပြီးသားဖန်တီးမှုများ, ဒီနှစ်လာမယ့်, ဒါမှမဟုတ်တံခါးဝ၌သူတို့ခြေရဖို့စိတ်အားထက်သန်, အသီးအသီးပြပွဲသူတို့ကိုကူညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နှင့်စုပေါင်းမစ်ရှင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သို့ delve လိမ့်မယ်ရရှိနိုင်သောများစွာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်သက်သက်အာရုံမှတဆင့်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် ပိုကောင်းတဲ့ရေဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်း navigate ။
အတော်ကြာ NAB ပြရန် : နယူးယောက်ကွန်ဖရသည့်အကြောင်းအရာများကဲ့သို့သောအစည်းအဝေးများပါဝငျမညျ
အဆိုပါ NYSBA ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေါင်းဆောင်မှုအကယ်ဒမီ
Post ကို | ထုတ်လုပ်မှုညီလာခံက NYC
အဆိုပါ, NYSBA နှင့်အတူပူးပေါင်းထုတ်လုပ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေါင်းဆောင်မှုအကယ်ဒမီ (DLA) အရောင်းရေဒီယိုလုပ်ငန်းဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ရိုးရာထုတ်လွှင့်ဘက်နှစ်ဦးစလုံးလွှမ်းခြုံများအတွက်လိုအပ်ချက်သင်တန်းပေးအောင်, စျေးကွက်ရဲ့လျင်မြန်ဆင့်ကဲရန်ပြီးပြည့်စုံသောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေါင်းဆောင်မှုအကယ်ဒမီဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းများ, အရောင်း, နှင့်ရေဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှုဘက်မှာအာရုံစိုက်ထားတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင် feature ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအသစ်တီထွင်ပုံစံ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ရေဒီယိုဘူတာရုံလိုအပ်ချက်များကိုကိုဖုံးလွှမ်းဖို့အကောင်းဆုံးရောင်းအားလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူတက်ရောက်ပေးအပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေါင်းဆောင်မှုအကယ်ဒမီခန်းထဲမှာကျင်းပလိမ့်မည် 1D, 1D03 နှင့် 1D05 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က, အောက်တိုဘာလ 16 - ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 17 ။
အဆိုပါ လွှထိပ်သီးအစည်းအဝေး ယင်းအသံလွှင့်မီဒီယာနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းကနေ 75 စပီကာကိုကျော် feature အဖြစ်ဖန်တီးမှုများကိုတကျရောကျပေးအွန်လိုင်းဗီဒီယိုအကြောင်းအရာမှငွေဝင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးအတွက်နည်းပညာနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆွေးနွေးမှုများ, စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများရယူ, စားသုံးမိခြင်းနှင့် transcoding, မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပြန်ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာနှစ်ဦးကိုတစ်နေ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအတွေ့အကြုံကိုသူတို့နှင့်အတူပေးအပ်နေစဉ်ဖန်တီးမှုများ, သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာချောမွေ့ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
လွှထိပ်သီးအစည်းအဝေးများအတွက်အစည်းအဝေးများခန်းထဲမှာကျင်းပလိမ့်မည် 3D10 နှင့် 3D11နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် updates များကို Twitter ပေါ်တွင်နောက်တော်သို့လိုက်နိုင်ပါတယ်: #streamingsummit.
အမျိုးမျိုးများများမှာမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ် Post ကို | ထုတ်လုပ်မှုညီလာခံက NYC။ ဤသည်နှစ်ရက်ကြာလေ့ကျင့်ရေးဖြစ်ရပ်ရုပ်ရှင်, တီဗီနှင့်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာများ, ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများ, colorists နှင့်ထုတ်လုပ်သူများပါဝင်သောအလယ်အလတ်-to-အဆင့်မြင့် level ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများစွာပါရှိပါတယ်ပါလိမ့်မယ်။
Post ကို | ထုတ်လုပ်မှုညီလာခံက NYC ခန်းထဲမှာကျင်းပလိမ့်မည် 2D10, 2D12 နှင့် 2D14.
ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 16 - ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 17 မှ။
အဆိုပါ TV2020: အဆိုပါအနာဂတ်ငွေဝင် ပြပွဲအားဖြင့်တင်ပြပါလိမ့်မည် TVNewsCheckနှင့်အထူးသဖြင့်က C-Suite ထုတ်လွှင့်, CEO ဖြစ်သူ / COO / CFOs အဘို့ဖန်ဆင်းထားသည်, CTOs, CROs နှင့် CIOs အဆင့်မြင့်ကြော်ငြာကနေအသစ်သောဝင်ငွေစီး၏အလားအလာအပေါ်အာရုံစိုက်ကြောင်းအဆင့်မြင့်ပြောဆိုမှုများမြားတှငျပါဝငျခွငျးများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခွင့်အလမ်းအဖြစ်, OTT နှင့် IP ကိုအကူးအပြောင်း, မိုဃ်းတိမ်ကိုစစ်ဆင်ရေးများနှင့်အရောင်းအလိုအလျောက်ပါဝင်သည်ကြောင်းနည်းပညာအပြောင်းအလဲများမှ ATSC 3.0 ။
TV2020 များအတွက်အစည်းအဝေးများ: အဆိုပါအနာဂတ်ငွေဝင်ခန်းထဲမှာကျင်းပလိမ့်မည် 3D09 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က, အောက်တိုဘာလ 16, 2019 ။
NAB ပြရန် မှာ 16, 17 - နယူးယောက်မြို့အောက်တိုဘာလ 2019 အပေါ်ကျင်းပလိမ့်မည် ယာကုပ်အမျိုးကို K. Javits ရေးစင်တာ။ ပြပွဲအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ, ပြီးတော့, ညီလာခံ / ပြပွဲမှတ်ပုံတင်ရေးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့် အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် NAB16 nabshow Broacasters အမျိုးသားအသင်းအဖွဲ့ New York ရေဒီယို ရေဒီယိုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ 2019-08-21
ယခင်: Pebble Beach Systems သည် Vizrt နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး playout ဂရပ်ဖစ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်
နောက်တစ်ခု: ATTO နယူးသိုလှောင်ဆက်သွယ်မှုထုတ်ကုန်များခင်းကျင်းပြပေးပါလိမ့်မည် @IBCShow